छ देशका सेनासामु अमेरिकी राजदूतले भने – नेपाली सेना एशियाभरिकै पुरानो र साहसी सेना हो – चितवन मिडिया
छ देशका सेनासामु अमेरिकी राजदूतले भने – नेपाली सेना एशियाभरिकै पुरानो र साहसी सेना हो
काठमाडौं। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले नेपाली सेनालाई एशियाकै पुरानो सेना भएको बताएका छन्। कुनै पनि विदेशी कुटनीतिज्ञले नेपाली से`नालाई यसको प्राचीन ऐतिहासि¥कतालाई उल्लेख गर्दै पहिचान दिएको यो पहिलो अवसर हो। नेपाली सेनाको स्टाफ कलेज शिवपुरीमा विभिन्न ६ देशका सेनाका अधिकृ¥तहरुलाई सम्वोधन गर्दै उनले नेपाली सेनाको ऐतिहासिक पक्षबारे बोल्ने क्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन्।
अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रले पहिलो`पल्ट नेपाली सेनको ऐतिहासिकतबारे यस्तो टिप्पणी गर्दै नेपाली सेनाप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरेको हो। ऐतिहा¥सिक तथ्यहरुका अनुसार, अमेरिकी सेनाको इतिहास सन् १७७५ देखि शुरु हुन्छ भने नेपाली सेना सन् १७४४ देखियता लगातार अविछि¥न्नरुपमा कार्यरत रहेको छ। यस हिसावले अमेरिकी सेना नेपाली सेनाभन्दा ३१ वर्षले कान्छो छ।
अमेरिकी सेनाको इतिहास सन् १७७५ देखि शुरु हुन्छ भने नेपाली सेना सन् १७४४ देखियता लगातार अविछि`न्नरुपमा कार्यरत रहेको छ। यस हिसावले अमेरिकी सेना नेपाली सेनाभन्दा ३१ वर्षले कान्छो छ। सरस्वती पूजाकै दिन फागुन ४ गते मंगलबार स्टाफ कलेज शिवपुरीमा अतिथि बक्ता¥का रुपमा राजदूत बेरीले भने, ‘नेपाली सेना एशियाको र संसारभरिकै पुरानोमध्येको सेना हो। यसले लामो गौरव गाथा बोकेको र देशको एकीकरणमा उल्लेख्य योगदान दिएको इतिहासमा उल्लेख पाएको छु।’
‘नेपालमा मात्र होइन विश्वव्या`पीरुपमा व्यवसायिक सेनका रुपमा परिचय दिन सफल भएको छ,’ उनले भने, राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाका रुपमा दशकौं खटेर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कायम गर्न ठूलो योगदान दिएको छ।’ नेपाली सेना र यसको स्वदेशभित्रको भूमिका र विदेशमा शान्ति कायम गर्ने सन्दर्भमा खेलेको भूमिकाबारे अमेरिकाले यसरी पहिलोपल्ट खुलस्तरुपमा प्रसंसा गरेको हो।
राजदूत बेरीले नेपाललाई एउटा अनुपम देश भन्दै यस्तो देशको सेना हुन पाउनु त्यहाँ काम गर्ने`हरुका लागि गर्वको विषय भन्दै स्टाफ कलेजमा अध्ययनरत सैनिक अधिकृ¥तहरुको मनोबल बढाएका थिए। उनले नेपाली सेना विश्वकै एउटा साहसीमध्येको सेना भएको बताएका थिए। बोल्नेक्रममा उनले प्रकृतिको संरक्षण र बन्यजन्तुको संरक्षणमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमि`काको पनि उनले मुक्त कण्ठले प्रसंसा गरेका थिए।
काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ढुक्क देखिन्‍छन् र कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेमा निश्चिन्त पनि । उनी प्रधानमन्त्री ओली नजिकका राजनी`तिकर्मी हुन् । उनीविरुद्ध दाहाल-नेपालसँग अविश्वास राख्‍न सक्ने गणितीय तथ्यांक पुगेको छैन। अविश्वास प्रस्ताव राख्‍न सक्ने संख्या प्रमुख विपक्षी कांग्रेससँग छ, तर कांग्रेसले प्रस्ताव राख्‍ने जाँगर नदेखाएपछि गुरु¥ङलाई ढुक्क हुने अवसर मिलेको हो । पूर्वमाओवादी साबि`कको एमाले कब्जा रणनीति थियो, त्यसलाई माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले पूरा गरेको जिकिर गर्छन्।
उनी भन्‍छन्, ‘प्रचण्ड सफल हुनमा मुख्य कारक व्यक्तिचाहिँ माधवकुमार नेपालको कुण्ठा र पदलोलुपता देखिन्‍छ ।’ सत्तारूढ दलभित्र खिचातानी र प्रदेश राजनी`तिका सन्दर्भमा निम्ति हरिबहादुर थापा र अनिष भट्टराईले गरेको कुराकानी :
नेकपा विभाजसँगै उत्पन्‍न राजनीतिक अस्थिरताबीच संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार अस्थिर देखिन्‍छन्, तपाईचाहिँ अलि ढुक्क देखिनु हुँदो रहेछ, कतिन्जेलसम्म ढुक्क रहन सक्ने विश्वास लिनुभएको छ ?
होइन, अब अस्थिरतामा खेल्ने काम भइरहेको छ । यो खालि केन्द्रसँग मात्र जोडिएको रहेनछ । कर्णालीबाट सुरु भएको खेल चलिरहेको छ । तर हा`मीकहाँ केही हुन्‍छ कि भनी सुरुमै हेक्का राखेको थिएँ । राष्ट्रिय जनमो~र्चाको तीन सिट थियो । हामी संयुक्त हुँदा चा¥लीस सिट थियो । त्यसो हुँदा हामीले समितिको एउटा सभापति दिएपछि जनमोर्चाबाट ‘गुड विल’ देखाइरहेका थिए । हाम्रो दलभित्र पूर्वएमालेको २८ मध्ये २७ जना एकै विचारधारा वा एकै गुटका थिए । त्यसपछि पूर्वमाओवादीका १२ जना थिए।
त्यसभित्र पनि माथि प्रतिनिधि सभा भंग हुँदैमा किन भंग गर्ने ? केन्द्रीय सरकार पुनर्गठन हुँदैमा यहाँ किन पुनर्गठन गर्ने भन्‍ने साथी हुनुहुन्‍छ। पहिला पनि हामी एकी¥करण हुनुअघि दुई पार्टीबाटै भएर संयुक्त सरकार बनाएको हो । त्यही ‘फर्म’मा रहँदा हुन्‍छ भनी उभिने साथीहरू भएका कारण पनि म अलि ढुक्क भएको हुँ।